Malunga nathi -Erbo (Xiamen) Technology Co., Ltd.
Tsalela Us: 0086-18259589998
Isilinda seHDPE edadayo
IHDPE Ibhokisi edadayo
IHDPE Ibhola edadayo
HDPE Blow Ukubumbela Ibhalansi nguSihlalo
IHDPE Blow Ukubumbela Seat
IHDPE Ibhakethi lokulwa nokungqubana
Isithintelo sendlela yeHDPE
I-Erbo (Xiamen) Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2020 ngemali eyimali ebhalisiweyo yezigidi ezingama-20 ze-RMB. Singumvelisi wemveliso yeplastiki ohlanganisa iR & D, uyilo, imveliso kunye nentengiso. Ifunyenwe kwindawo entle yesiXiamen City, eyaziwa ngokuba yi "Sea Garden", iXiamen ayisiyommandla okhethekileyo wezoqoqosho kuphela, kodwa ikwanendawo yothutho elula kakhulu yaselwandle, edlala indima ebalulekileyo ekuthuthweni kwempahla kunye nophuhliso lwezoqoqosho kwiindawo ezahlukeneyo. kwaye unokuqinisekisa isantya sonikezelo.
Emva konyaka wophuhliso oluqhubekayo kunye ezintsha, Erbo Technology iye yaba umenzi phambili iimveliso ukubumbela eTshayina. Kwinkalo yokuvelisa imveliso yokubetha, inkampani yethu iseke ukuqhubela phambili kwezobuchwephesha.
I-Erbo Technology ineeseti ezininzi zemilinganiselo yokubumba enkulu yemveliso, ikakhulu ebandakanyeka kwimveliso yokubumba enjengokuntywila, iipontion, izixhobo zothutho, iipellethi zokuhamba, ifanitshala yeplastiki, izitya zokubumba, izikhongozeli ezingenanto, iibhokisi zezixhobo, njl. Igxininisa kwimveliso ezahlukeneyo zeplastiki iimveliso ezibuhlazarha kwaye uneminyaka emininzi yamava obuchule kulawulo lobugcisa kwimveliso yokubetha izixhobo zokwenza imveliso, uyilo lwemveliso, ukuvelisa ukungunda, kunye nemveliso egqityiweyo yokulungisa ukubumba. Iimveliso zokubumbela eziveliswayo ziveliswa ngokusebenzisa i-resin ye-polyethylene yensimbi ephezulu kakhulu njengezinto ezingavuthiyo, kusetyenziswa itekhnoloji yokubumba ephambili. Inezibonelelo zobunzima bokukhanya, amandla aphezulu empembelelo, ukumelana nokubola, ukuhlala ixesha elide, umthamo omkhulu wokuthwala, kunye nokungatyibiliki.
I-Erbo Technology ineqela elilawulayo ekumgangatho ophezulu kunye namandla esayensi kunye netekhnoloji eyomeleleyo.I-Erbo Technology ipasile isetifikethi se-CE, isatifikethi senkqubo yolawulo lwekhwalithi ye-ISO 9001, isatifikethi senkqubo yolawulo lokusingqongileyo ye-ISO 14001, kunye ne-ISO 45001 yenkqubo yezempilo yolawulo nokhuseleko.
Oko yasekwayo, ibisoloko iphumeza umgaqo-nkqubo weshishini kunye nefilosofi yenkcubeko "yetekhnoloji ekhokelayo, ejolise ebantwini, kulawulo lwezenzululwazi, kumgangatho wokuqala kunye nenkonzo ebalaseleyo". Akukho nto ibhetele, kungcono kuphela. Siza kuqhubeka nokuphucula ulawulo lwangaphakathi kunye nezinto ezintsha zetekhnoloji ukwenza umgangatho ophucukileyo kunye neemveliso ezizinzileyo. "Ithemba livela kumgangatho", siya kuqhubeka nokuphucula umgangatho wemveliso, ukuphucula iinkonzo zobugcisa, kunye nokuhlangabezana ngcono neemfuno zabathengi. Iimfuneko zabathengi zizizathu zethu zokukhuthaza. Ukubonelela abathengi ngeemveliso ezingcono kunye neziphezulu zezona njongo zethu! Masidibanise izandla nabathengi basekhaya nabangaphandle ukwenza ingomso elingcono kushishino lokubumba!
indawo yomzi mveliso tangqiaotang zhang jiagang isixeko china